Navotsotra ihany ilay mpitsoa-ponenana Iraniana-Kiorda Behrouz Boochani · Global Voices teny Malagasy
Mialokaloka vonjimaika ao Zealand vaovao ity mitady fialokalofana ity
Voadika ny 21 Novambra 2019 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, українська, Français, Español, English
Behrouz Boochani – sarin'ny Wikimedia avy amin'i Hoda Afshar (CC BY-SA 4.0) Behrouz Boochani – Wikimedia image by Hoda Afshar (CC BY-SA 4.0)
Navotsotra ihany ilay mpanora-gazety sady mpanoratra nahazo loka, Behrouz Boochani, izay fanta-daza amin'ny tantarany niainany mivantana momba ireo fepetra any amin'ireo trano fitazomana mpifindra-monina Aostraliana. Faly tamin'ny vaovao ireo mpanohana fa efa tonga any New Zealand ity mpitsoa-ponenana Iraniana-Kiorda ity.
Nitady fialokalofana tany Aostralia tamin'ny taona 2013 i Boochani ary nogadraina tany amin'ny fonja ampitan-dranomasina tany Papua New Guinea (PNG) nandritra ny enin-taona mahery, voalohany tao amin'ny Nosy Manus ary farany tany Port Moresby, ho ampahany tamin'ny fifanarahana teo amin'ny roa tonta.
Vakio bebe kokoa: Fahafatesana, Daroka manasongadina ny horohoro ao amin'ny foiben'ny fonjan'ny mpifindra monina ao amin'ny nosy Manus ao Aostralia
Tany New Zealand, amin'ny maha vahinin'ny fetiben'ny mpanoratra azy, dia manana visa iray volana i Boochani ary mety hitady fialokalofana any. Na dia nekena tao anatin'ny fifanarahana famerenana indray “arak'ady” amin'i Etazonia aza izy, dia miahiahy izy fa mihisatra ny fivoarana ary nilaza fa tsy matoky loatra ny fizotry ny raharaha izy.
Nahazo “Tiako” maherin'ny 16.000 ny sioka nalefan'i Boochani tamin'ny nahatongavany tany New Zealand:
Vao tonga aty Nouvelle-Zélande aho. Tena mampientam-po ny mahazo fahafahana taorian'ny enin-taona mahery. Nasaina tamin'ny Fetibe Manerantany tao Christchurch aho ary handray anjara amin'ny hetsika iray ao. Misaotra an'ireo namana rehetra nahafahana tonga tamin'izao.
Niavaka tamin'ny valinteny ho an'ny siokany ireto fanehoan-kevitra ireto:
Hikarakara anao i Nouvelle-Zélande. Menatra aho fa tsy vitany hoe tsy nikarakara anao ihany i Aostralia, fa koa nitazona anao tany amin'ny fonja ampitan-dranomasina, izay mifanohitra amin'ny adidy ho an'ny zon'olombelona. Ary nandritra ny 6 taona. Ary mbola manao izany amin'ny hafa izy ireo.
Behrouz no vaovao tsara indrindra henoko nandritra ny herinandro maro.
Manantena aho fa hahita fiadanana sy fahasambarana any #NewZealand ianao.
Antenaina fa mbola ho avotra tsy ho ela ireo namanao any PNG.
Mendrika ho avy milamina daholo ianareo rehetra, lavitry ny fampijaliana izay niaretanareo rehetra.
Mirary soa 🙏🏼
Tena faly. Alahelo sy henatra lehibe noho ny fomba nitondran'ny firenenay anao – ary misaotra anao noho ny herim-po sy ny fahamendrehanao. Manantena aho fa hanaraka ny fandraisanao anjara. Ankehitriny – tsy maintsy miasa ho an'ny hafa ao amin'ny #Manus #Nauru #auspol isika
Tamin'ny taona 2019, nafindra tany amin'ny renivohitr'i PNG, Port Moresby ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana izay nijanona tao amin'ny Nosy Manus, voalaza fa miisa 200. Mandritra izany fotoana izany, lehilahy 46 izay hita fa ‘tsy mpitsoa-ponenana’ no notazonina tao amin'ny trano fanagadrana tahaka ny fonja tao amin'ny fonja Bomana. Toa eo am-pelatanan'ny governemanta PNG ny momba azy ireo.
Vakio bebe kokoa: nahazo fanonerana manan-tantara tao Aostralia ireo gadra mpitady fialokalofana tany am-pitandranomasina
Na dia sarotra aza ny mamaritra ny tena isa marina, mpitsoa-ponenana teo amin'ny 500 teo – izay maro tamin'izy ireo no tao nanomboka ny taona 2013 – no mijanona ao amin'ny Repoblika mahaleo tena an'i Nauru izay anisan'ny politikan'ny fitantanana ny ampitan-dranomasina any Aostralia.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Fred Petrossian ao amin'ny Global Voices tamin'ny volana Aogositra 2019, dia nitantara ny fiantraika sasany tamin'ny fanagadrana tsy voafetra i Boochani:
Ny fotoana no zavatra manan-danja indrindra hamaritana an'ity rafitra ity. Ny olona alefa any am-ponja dia mahalala ny faharetan'ny saziny, saingy tsy fantatray ny anay, ary tsy fantatray hoe rahoviana izahay no afaka miala amin'ity toerana ity. Miteraka fampijaliana ara-tsaina tanteraka izany.
Vakio bebe kokoa: Hatrany amin'ny fampirantiana isaky ny roa taona ao Sydney ka hatrany amin'ny fomba fikarakarana ireo mpitsoa-ponenana manerantany asongadin'i Ai Weiwei
Nolavin'ny governemanta Aostraliana imbetsaka ny tolotra nomen'i Nouvelle-Zélande haka vitsivitsy amin'ireo mpitsoa-ponenana avy any Manus sy Nauru, milaza fa hiteraka varavarana hafa fahatongavan'ireo sambo izany; raràna tsy hialokaloka any Aostralia ny mpitsoa-ponenana tahaka izany.